Qaybo ka mid axdi qarameedka, dersey Qaybo, Qaybaha CNC jeestay, CNC Aluminum Qaybo - Jinghai
Sax jeestay qaybo
Kartoo qaybo ka jeestay
Ningbo Jinghai waxaa la sameeyay tan iyo 2012 by Mr Haibo Chen. Iyada oo waayo-aragnimo qani ah in qaybo ka mid machining, waxyaabaha-sax sare iyo gaarsiinta waqtiga, waxa uu si degdeg ah horumariyo ilaa hadda, waxaan leenahay saddex waaxaha processing iyo in ka badan 80 shaqaale ah. Si loo daboolo baahida awoodda wax soo saarka sii kordhaya, tirada qalabka sii kordhaya, iyo Ulahoodii teknoolojiyad sare iyo aad u badan nagu soo biiraan.
24 saacadood Service
Qarameedka qaybo ka mid steel
Qarameedka qaybo copper
Qarameedka qaybo aluminium
Eeg Waayo, Naftaada.
Words oo kaliya ayaa kuu sheegi kara wax badan. Fiiri gallery this of photos in aad aragto Jinghai xagal kasta.
MA Xitaa More: aqbalayno wax ganacsi OEM iyo ODM. Iyo macaamiisha siin adeeg one-stop, oo ay ku jiraan Design, ansixin Evalution, qiimesheegta, Processing, Logistics, Customs. Waxa kaliya ee aad noo soo sheeg adiga oo dalabka ama fikrad, shaqada inteeda kale waxaan kuu samayn doonaa.
Raadinta Weeraryahanka in aad baaritaan, iyo soo dhaweyn aad mar walba soo booqda. Mahadsanid.
Thanks badan oo aad reading
Ma leedahay querry kasta? Pls ha ka cabsan in aad la xiriirto us.We waa ku taagan in aad u adeegtaan.
Cinwaankaaga: No.25, Huanzhen North Road, Jiangshan Town, Degmada Yinzhou, Ningbo, Shiinaha
Qaybo ka CNC shiidi Machine, Qaybo ka Machine axdi qarameedka, Cnc Turning Stainless Milling Parts, Aluminum Machining Parts, CNC axdi qarameedka Machine , Cnc Precision Machining Mechanical Grinding Part,